Ahoana ny fomba hisorohana sy hialana amin'ireo soritr'aretin'ny rhinitis alergika amin'ny ankizy | Bezzia
Ahoana ny fomba hisorohana sy hanalana ny soritr'aretina rhinitis alergika amin'ny ankizy
Maria Jose Roldan | 26/03/2021 22:00 | Reny torohevitra
Amin'ny fahatongavan'ny lohataona dia misy tranga maro amin'ny allergy izay mitranga amin'ny ampahany betsaka amin'ny mponina. Raha ny ankizy, ny mahazatra dia fantatra amin'ny hoe rhinitis mahazaka.
Ity toetran'ny taovam-pisefoana ity dia manelingelina ny kely indrindra amin'ny trano satria miteraka fitohanana mafy eo amin'ny orona miaraka amin'ny fahasosorana lehibe eo amin'ny maso. Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hasehonay anao ny andiana torohevitra izay afaka manampy amin'ny fanalefahana ireo fambara ireo.
1 Inona avy ireo soritr'aretin'ny rhinitis mahazaka amin'ny zaza
2 Ahoana ny fomba hisorohana ny soritr'aretin'ny rhinitis mahazaka
3 Ahoana no hanamaivanana ny soritr'aretin'ny rhinitis mahazaka
Inona avy ireo soritr'aretin'ny rhinitis mahazaka amin'ny zaza
Ny fisian'ny vovobony eo amin'ny tontolo iainana no tena antony mahatonga ny rhinitis mahazaka ny zaza. Ity allergy ity dia miteraka rovitra sy fahasosorana amin'ny maso miaraka amina moka be ao am-bavorony sy tenda mangidihidy. Izy io dia andiana soritr'aretina izay manelingelina ny ankizy kely, noho izany ny maha-zava-dehibe ny fisorohana sy ny fanalefahana azy ireo.
Ahoana ny fomba hisorohana ny soritr'aretin'ny rhinitis mahazaka
Zava-dehibe ny fitazonana ny tontolo iainana ao an-trano hadio sy madio araka izay azo atao noho izany ilaina ny manadio ny trano manontolo tsy tapaka.
Tokony hialana amin'ny fananana zavamaniry mamokatra vovobony sy biby very volo be.
Ny efitranon'ilay zaza dia tsy maintsy asiana rivotra isan'andro ary sasao ny fandriana indray mandeha isan-kerinandro.
Aza soratana ao anaty trano ary toerana misy vovoka be loatra.
Tena zava-dehibe ny manasa tanana ny zanakao im-betsaka isan'andro, indrindra raha efa nilalao teny amin'ny arabe izy.
Ny sakafo tsara dia fanalahidy raha ny amin'ny fisorohana ny soritr'aretin'ny rhinitis mahazaka. Ny sakafo dia tokony hanan-karena voankazo sy legioma izay be vitamina C. Ny fihinanana asidra folika dia mety hanakanana ireo soritr'aretina mety hateraky ny tsy fahazakana.
Ahoana no hanamaivanana ny soritr'aretin'ny rhinitis mahazaka
Ny zava-mahadomelina na fanafody dia fanalahidy raha manamaivana ny soritr'aretina. Ny antihistamines sy ny kortikosteroid dia tsy maintsy entina amin'ny alàlan'ny fanafody.
Ankoatra ny fanafody toy izany, Azonao atao ny manamarika andiana torohevitra vitsivitsy izay manampy amin'ny fanalefahana ireo soritr'aretina voalaza etsy ambony:
Diovy sy sasao tsara ny vavoron'ilay zaza miaraka amin'ny fanampian'ny vahaolana masira.
Atsangano hiala eo am-pandriana ny kidoro hisorohana ny vongan-tsiranoka tsy hivangongo ao am-bavorony.
Mampiasa «moisturiser» ao an-trano zava-dehibe izany rehefa mahazo tontolo iainana mando.
Ny fisotroana rano betsaka dia manampy amin'ny fanalefahana ny moka sy aza be orona be orona.
Diovy ny maso miaraka amin'ny gauze ary vahaolana masira kely.
Raha fintinina, amin'ny fahatongavan'ny lohataona, ny rhinitis mahazaka dia mahazatra amin'ny ankizy, satria ny soritr'aretina voalaza fa allergy dia somary manelingelina sy mahazo aina izy ireo. Zava-dehibe ny fandraisan'ny ray aman-dreny ny fepetra fisorohana rehetra mba hahafahan'ny zaza miaina fiainana araka izay azo atao ary tsy hampijalian'ny rhinitis mahazaka voalaza etsy ambony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » RENY » Reny torohevitra » Ahoana ny fomba hisorohana sy hanalana ny soritr'aretina rhinitis alergika amin'ny ankizy
Jiro jiro rindrina 5 hanazava ny zoronao